महिनावारी रोकेर पूजा गर्नु गलत | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / महिनावारी रोकेर पूजा गर्नु गलत
महिनावारी रोकेर पूजा गर्नु गलत
Posted by: युगबोध in विचार October 23, 2018	0 186 Views
दे उता रिसाउछन् र बरदान मिल्दै न भन्ने डरले महिनावारी रो के र पूजापाठ गर्ने संस्कार हुर्किदो छ । बिहे , पूजालगायत सबै शुभसंस् कारमा महिनावारी वर्जित छ । त्यसलाई रो क्ने औ षधिहरु बने का छन् । त्यही खाएर महिलाहरु महिनावारी टार्छन् र पूजा तथा तीर्थव्रतमा सरिक हुन्छन् ।
औ षधि दिनुस् त, परिचितले जस् तै एकजना ग्रँहकले मे डिकलमा औ षधि माग्दै गर्दा भे टिनुभयो  । कुन औ षधि हो ? मे डिकल सञ्चालकले सो ध्नुभयो  । के हुने हो उही त हो अलिक लजाएर जवाफ दिनुभयो  । उहाले मिन्स शब्दको उच्चारण गर्न पनि धक मान्नुभयो  । पुराना ग्राहक हु“ । कतिपटक लगिसकें  । अब त अलि छुट गरे र दिए पनि हुने हामीलाई त । लजालु पाराले हास् दै पै सा तिर्नुभयो  ।
फर्किनै आ“टे को बे ला ‘किन महिनावारी रो क्नु पर्छ र ?’ घो राही बजारको त्यस मे डिकलमा अरु कामले बसिराखे को यो स् तम्भकारको प्रश्न थियो  । ‘जुठो मा पूजा गर्न मिल्दै न भन्छन् त ? सबै ले भने पछि मान्नै प¥यो  ।’ यो जवाफ काफी थियो  । महिलाहरु आफूले पाएको बरदान महिनावारी । जुठो ठान्छन् । घृणा गर्छन् । महिनावारी आमा बन्ने सौ भाग्य हो  । जसको छो रीको समयमा महिनावारी हुन्न उसलाई बाझो पन हुनसक्छ । त्यत्रो खतराबाट मुक्त गराउने महिनावारी हो  । महिनावारी नभए यौ न एवं प्रजनन अंगमा समस् या हुन सक्छ र सन्तान नजन्माउने महिला बन्न सक्छिन् ।
‘महिनावारी हु“दा जुठो हुन्छ भन्ने सा“च्चै हो कि बलै हो ?’ हि“ड्दै गरे को व्यक्ति रो किएरै चासो राख्नुभयो  । मलाई पे शा सो ध्नुभयो  । मे डिकल साहुले नै पत्रकार भने र परिचय खुलाइदिनुभयो  । ती महिलाले थप दिक्दारी पो ख्नुभयो , कति दिन औ षधि खाने हो ?’ हे र्दा तीन दशक नजिक उमे र दे खिन्थ्यो  । शुभकार्यमा औ षधि खाएरै महिनावारी रो क्ने हो भने दुई दशक बढी समय लाग्थ्यो  । महिनावारी जुठो हो र दे उता रिसाउ“छन् भन्ने मा पनि विश्वास थिएन । त्यही भ्रममै उहा“ जस् ता धे रै महिलाले दिन गुजारे का छन् । मठ मन्दिर जाने यो जना गर्नुअघि महिनावारीको हिसाव हुन्छ ।
‘महिलाहरुले सिर्जना गरे को हो कि आफै महिनावारी भएको हो ?’ ती महिलालाई प्रश्न गरे को थिए“ । त्यसस“गै अकोर् प्रश्न थियो – ‘महिनावारी हुन नदिने बनाउ“छु भन्यो भने सकिन्छ कि सकिदै न ?’ यी दुबै प्रश्नको जवाफ थियो – महिलाले कहा“बाट बनाउन सक्ने हो ला, पहिलो प्रश्नको जवाफ थियो  । सकिदै न दो स्रो प्रश्नको जवाफ दिनुभयो  । उहा“ आफै ले भन्नुभयो – औ षधिले अलि दिन पर सानेर् मात्रै हो  । यसरी कुरा गरिसके पछि अलमलमा पर्नुभयो  । कुरा सुन्ने जस् ता राम्रा हुन लाग्या थे , गाडी छुट्ने भयो के गनेर् जान्छु भन्दै विदा हुनुभयो  ।
उहा“स“ग भएको कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने के ही महिलाहरु महिनावारी प्रकृतिले दिएको हो भन्ने बुझ्दै नन् । हामीले बनाएका गलत संस् कार तो ड्ने हो । प्रकृतिलाई रो क्न छे क्न सक्दै नौ ं । हरे क चिज मान्छे ले भगवानको दे न मान्छ ।
आफ्नो शरीर पनि भगवानको बरदान हो  । सुन्दर शरीर, अंग प्रत्यंग भगवानकै उपहार भनिन्छ । महिनावारीलाई जुठो भने र तिरस् कार गरिरहे का छौ ं । उनै भगवानलाई पूजा गर्न, फूल चढाउन, धुप बत्ती बाल्न नचल्ने भन्दै छौ ं । बच्चा जन्माउने र आमा बन्ने सौ भाग्य दिने भगवान र महिनावारी जुठो भन्ने भगवान फरक छै नन् । जसले दिए उनै लाई पूजा गनेर् हो , तिनले दिएको अंग फाले र पूजा गर्नुपदैर् न ।
अकोर् मे डिकलमा पुग्दा पनि महिनावारी रो क्ने औ षधि खो ज्ने अर्की युवतीस“ग भे ट भएको थियो  । निकै खाइलाग्दो र सम्पन्न परिवारको आभास मिल्थ्यो  । पढले ख गरे का र पुगिसरी आउने परिवारकी ती महिला पनि मे डिकल सञ्चालकस“ग परिचित झै ं लाग्थ्यो  । महिनावारी रो क्ने औ षधिका नियमित ग्राहक नै हुनुहुन्थ्यो  । उहा पसे पछि नै मे डिकल सञ्चालकले कुरा बुझ्नुभयो  । तन्दुरुस् त मान्छे मे डिकल पसे पछि सामान्य व्यक्तिले पनि आफूलाई औ षधि लिन आएको हो इनन् भन्न सक्थ्यो  ।
‘कता जाने यो जना बनाउनुभा छ र ?’ मे डिकल सञ्चालकबाट प्रश्न आयो  । उहा“ले ‘पर्सि सुपादे उराली जाने कुरा छ ।’ भने र जवाफ दिनुभयो  । मलाई भने उहा“हरुको प्रसंगले लज्जित बनाएको थियो  । उनीहरुको अवस् थाले ‘सा“च्चै पढे ले खे का मान्छे हरु पनि महिनावारीको अर्थ बुझ्दै नन त ?’ प्रश्न जगायो  । मन्दिर जानुअघि तीन दिनदे खि नै औ षधि खान शुरु गर्नुपर्छ । मन्दिर जाने र महिनावारी हुने दिन स“गस“गै परे काले पूजा गर्न नपाइएला भन्ने डर थियो  । महिनावारी रो क्दा हुने खतरा महसुस गरे को दे खिएन ।
यही सवालमा अन्य महिलासग पनि के ही छलफल गरे को छु । तपाइ“को महिनावारी भएको दे उताले थाहा पाउछन् कि पाउदै नन् ? यसको जवाफमा भन्नुभयो – ‘दे उतालाई त के थाहा ? कसले दे ख्छ त ? घरका मान्छे ले थाहा पाउ“छन् ।’ यो जवाफले भगवान रिसाउदै नन् भन्ने प्रष्ट भयो  । हो पनि, जसले महिलाको पाठे घर दिए, यो नी बनाइदिए, स् तन दिए, महिनावारी हुने बनाए, बच्चा पाउने र आमा बन्ने सौ भाग्य प्रदान गरे तिनलाई जुठो हु“दै न । उनै ले बनाइदिएका हुन् । बरु घरका मान्छे ले जुठो भयो भन्छन् । सासु ससुरा, जे ठाजु जे ठानी, श्रीमान, नन्द दे वर यस् तै –यस् तै हुन् । ती घरका मान्छे ले समाज र परम्पराको संस् कारबाट सिके का हुन् ।
महिनावारी हु“दै पूजा गरे पछि किन पूजा गरिस् भन्छन् भने र प्रश्न गर्छन् । भएको छै न भन्ने हो भने पनि किन रो कियो भन्छन् । त्यसकारण महिलाहरुले नचाह“दा नचाह“दै महिनावारी रो के र पूजा गर्छन् । अब अनपढ एवं गवा“र सासु ससुरा तथा श्रीमान् हुने हरुका बाध्यता र चटक पानेर् हरुका रहर के लाउनुपर्छ । धन पै साको उन्मादमा नाना भा“तीका संस् कार फै लाएर समाज धुमाल्न पाइ“दै न । ढुंगामा दूध चढाउन, रुखका बुटामा धजा टंगाउन, ठूलो दान गर्न सक्ने हरुले रहर पूरा गरुन् । सर्वसाधारणमा भ्रम फै लाई खर्च बढाउन पाइ“दै न । अनाहकमा औ षधि खुवाउनुहु“दै न । कुनै पनि तथ्यले महिनावारी जुठो हो भने र प्रमाणित गर्न सक्दै सक्दै न ।
जसले घर, परिवार र आफन्तको भलाइका लागि महिनावारी रो के र पूजा गर्छ उसै ले व्यक्तिगतरुपमा औ षधिको बो झ बे हो र्नुपरे को छ । चिकित्सकहरुले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ बाध्यात्मक अवस् थामा बाहे क औ षधि खानुहुन्न । घो राही उपमहानगरपालिकाका मे यर नरुलाल चौ धरीको उद्घो ष छ– दबाई नखाने नागरिक बनाउ“छु । नगरवासीले कुनै किसिमको दबाई नखाने अवस् था आयो भने समृद्धि हो  । उपमहानगरपालिकाको समृद्धिका लागि कसै ले पनि दवाई नखाई स् वस् थ हुने वातावरण तयार पारौ ं । यता सभ्य र सम्भ्रान्त नागरिकहरु महिनावारी रो क्न समे त मे डिकलको औ षधि खान्छन् । महिनावारी गराउन औ षधि खानु उपयुक्त हो  । अब रो क्न पनि औ षधि खानुपर्छ भने चटक हो  । नाटक हो  । ढो ंग हो , आडम्बर हो  । यसलाई चिर्न उपमहानगरले पनि ध्यान लगाउनुपर्छ ।
महिनावारी स् वच्छताका क्षे त्रमा लामो समय काम गर्नुभएका ने पाल रे डक्रस सो साइटी दाङ शाखाका वास अधिकृत विश्राम अधिकारीका अनुसार बच्चा पाउने सुअवसरलाई जुठो भने र अपमानित गर्नु निकै बिडम्बनाको कुरा हो  । छो रीको समयमा महिनावारी भयो भने म बच्चा पाउन सक्षम भए“ भने र उत्सव मनाउनुपर्छ । त्यही खुशीलाई लुटे र संस् कारले को रा बस् नुपर्ने बनाएको छ । ने पालका प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो न्याय आत्म कथामा पहिलो पटक १२ दिन र दो स्रो पटक चार दिन बुवा, दाजु भाइले नदे ख्ने गरी को रामा बसे को उल्ले ख गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै छाउ परम्परा छ भनिन्छ । आखिर बिराटनगरकी कार्कीलाई पनि महिनावारी बार्नुपरे को रहे छ । अहिले आएर गलत भएको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।
सुत्के रीलाई जस् तै महिनावारीलाई पनि से वा सुरक्षा गनेर् बे लामा छुई बारे र एक्लै बसे र जुठी बन्नुपनेर् दिदी बहिनीको वाध्यता छ । यो संस् कारलाई जरै बाट उखे ल्न आउने पिंढी सक्षम बनाउने अभियानको जरुरी छ । ने पाल रे डक्रस सो साइटी दाङले जिल्लाका सबै जसो विद्यालयमा अतिरिक्त पुस् तक बनाएर पठाएको छ । त्यसकै आधारमा कक्षा चारदे खि महिनावारी स् वच्छताको पढाइ हुने भएको छ । जसले आउने पिढीलाई महिनावारी जुठो हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त गनेर् छ । सबै महिलालाई महिनावारीको समयमा शुभ अशुभ कार्यमा सहभागिता जनाउन रो क्ने छै न । को ही पनि महिलाले पहिलो वा जुनसुकै महिनावारीका बे ला सम्मान पाउनेछन् ।
हरे क विद्यालयले प्याडको व्यवस् था र जलाउने इन्सिने टर निर्माण गरे को हुने छन् । सरलाई प्याड माग्ने छात्राहरुले घरमा बाबु, दाजु भाइलाई पनि अह्राउन सजिलो मान्ने छन् । घर परिवारले जुठो भने र महिनावारीलाई अपमान गनेर् छै नन् । बरु त्यस बखतमा रे ष्ट गनेर् , झो लिलो र पो षिलो खाना दिने , चिसो घुस् न नदिने लगायतका सुविधा दिने छन् । बढीमा छ घण्टाका बीचमा प्याड टाला फे नेर् , टालाहरुलाई घाममा सुकाउने र घाम नलाग्दा आइरन गनेर् जस् ता सुविधा दिने छन् । सबै महिलालाई महिनावारी हु“दा पूजापाठ गर्न मिल्ने बातावरण बन्ने छ ।
मे डिकल सञ्चालकहरुका अनुसार अधिकांश महिलाहरु फे मी ट्रो न नामक ट्याब्ले ट प्रयो ग गर्छन् । यसले खा“दाको भो लिपल्ट महिनावारी बनाउन सक्छ । त्यस दिन भएन भने औ षधि खा“दाको दिनसम्म रो किन्छ । खान छो डे को भो लिपल्ट मात्रै महिनावारी हुन्छ । पूजापाठ गनेर् , मन्दिर जाने लगायतका हरे क शुभकार्यमा महिनावारी सार्न सजिलो भएको छ । यसै गरी इको नले एकसय २० घण्टासम्म पर सार्छ । यस् ता औ षधि खाएपछि पूजा गनेर् अवसरबाट चुक्नु परे को छै न । महिनावारी भएकै बे ला पूजापाठ गनेर् हरु भने विरलै पाइन्छन् । सरस् वती पूजाका दिन के ही विद्यालयका महिला शिक्षक र विद्यार्थीले महिनावारीको प्रवाह नगरी पूजा गर्न थाले का छन् ।
यसरी चार पाच दिनसम्म औ षधि खाएर महिनावारी पर धके ल्नु चिकित्सकहरुका अनुसार उचित हो इन । महिनावारी हु“दा फुट्ने पाठे घरका पत्रहरु औ षधि खाएपछि खुल्दैनन् । त्यसले महिनावारीका हमोर् न उत्पादनको मात्रामा फरक पार्छ । त्यसरी रो क्ने महिलाहरुमा स् तन दुःख्ने , महिनावारीको बे लामा रगत अनियमित हुने वा स् वाभाविक भन्दा बढी बग्ने लगायतका समस् याहरु दे खिन सक्छन् । संस् कार मान्ने नाममा आफ्नो ज्यानलाई अप्ठे रो पार्नु उचित हो इन । आफ्नो समयमा निस्कने रगत रो किनु भने को अरुतिर हानि गर्नु हो  । प्राकृतिक प्रक्रिया रो क्नु हो  । त्यो मूर्खता भन्दा अरु हुदै हो इन ।
Previous: कर्णालीको प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्य
Next: नेताको सामाजिक मोल
लोकतन्त्रको विकल्प छैन
सुन सुहाउनको लागि होइन नुहाउनको लागि हो
एक ध्र्रुवीय विश्व दुई ध्रुवीय एशिया